ရခိုငျလူမြိုးဖွဈပွီးမွနျမာမိနျးကလေးအား လကျထပျယူခဲ့တာကွောငျ့ ခွိမျးခွောကျမှုတှပေါခံနရေရှာတဲ့ ဘုနျးလြှံ – Maythadin
ရခိုငျလူမြိုးဖွဈပွီးမွနျမာမိနျးကလေးအား လကျထပျယူခဲ့တာကွောငျ့ ခွိမျးခွောကျမှုတှပေါခံနရေရှာတဲ့ ဘုနျးလြှံ
May Thadin | January 11, 2021 | Celebrity | No Comments
သရုပျဆောငျဘုနျးလြှံကတော့လကျရှိမှာ ခဈြရတဲ့ ဇနီးခြောလေးနဲ့အတူ ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးကိုရရှိပိုငျဆိုငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဇနီးနဲ့အတူအရသာရှိတဲ့ရခိုငျဟငျးလြာနဲ့အခွားသောစားသောကျဖှယျရာတှကေို ခကျြပွုတျရောငျးခပြေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျနာရီပိုငျးလောကျကလညျးဘုနျးလြှံရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာရခိုငျလူမြိုးဖွဈပွီးမွနျမာမိနျးကလေးကိုလကျထပျယူခဲ့တာကွောငျ့ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှမြေားစှာခံနရေကွောငျးရငျဖှငျ့ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ”အငျတာဗြူးမှာမီးလို့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖွလေိုကျမိပါရေ
အားအားယားယားပွသာနာကိုကွီးအောငျမလုပျစှာကောငျးကတျပါဖို့ကြှနျတျောဇာဖွဈလို့နှောကျယှကျတလေူတိကိုပွောရလဲဆိုကေ၊ 1 ကြှနျတျော.online မှာဈေးရောငျးရေ..အျောဒါမမှာပဲဖုနျးဆကျပနာအကိုမယားဇာလူမြိုးလဲ.ဇာဖွဈလို့ယူလဲ.အမွဲတမျးဖုနျးဆကျပနာနှောကျယှကျတေ၊
2 fb CB မှာ.အကိုရခိုငျမဟုတျပါလား.ဦးနှောကျမရှိပါလားအကို့မယားကိုဇာဖွဈလို့ယူလဲ၊ 3.fb comments မှာရီးကတျတေ..မှေးရစှာဝမျးရီဆာရလေတျသူမှေးစှာလား.ကြှနျတော့အမိမှေးစှာလားရခိုငျကိုလာကလေိုကျသတျဖို့လာဝံ့ကလောလတျကိုယျ့မှေးရပျမွကေိုလာဖို့စှာတောငျ
လာလို့မရဗယျြလားပွောကတျပါဦး။ 3.fb. comments တိမှာထပျရီးကတျတေ..ထောငျထဲဝငျခါ.ပွနျလှတျဖို့ဆုတောငျးပီးကတျတကြေေးဇူးတငျပါရေ..ပွနျထှကျလာရခေါ ဗမာမကိုယူပွီးကေ.ကြေးဇူးဆပျစှာလားတဲ့ဆုတောငျးပီးလို့ကြေးဇူးတငျပါရေ..ယကေလေဲ့ဆုတောငျးတိုငျး
နခေ့ငျြးညခငျြးလှတျလာစှာတော့မဟုတျ.ကိုယျ့ပွဈဒဏျကို.ကအြေောငျ.7 နှဈ နဲ့.3 လပီးဆပျပွီးထှကျလာစှာပါ၊ လှတျငွိမျးခမျြးသာနဲ့လှတျစှာကလဲဘုနျးလြှံ မို့လှတျစှာမဟုတျ..ပွဈဒဏျကို.4ပုံ.3 ပုံပီးဆပျပွီးလို့.လှတျစှာပါ.ယကေလဲ့ဆုတောငျးပီးကတျစှာကိုကြေးဇူးတငျအသိအမှတျပွုပါရေ
ကြှနျတော့အဖအေမနေဲ့ဗမာသူငယျခငျြး ထိနျဝငျးနောငျပါ၊ အခုဘဝတခုကိုကောငျးကောငျးမှနျမှနျရပျတညျပွီးကလြှေောကျနီစှာမှာ.အကောငျးမှနျဆုံးယာအားပီးစီခငျြပါရေ၊ ဘဝမှာလူ့ငရဲမှာလဲအကွာကွီးနီပွီဗယျြ.အခုပိုငျဆဲနီစှာလောကျကို.တခုလမေ့ဖွဈ.ယကေလေေ.အမြိုးရို့.
အမှနျတရားကိုသိအောငျ.ပွောပွရဖို့မဟုတျကအေထငျလှဲဖို့.ပွောနီနှောကျယှကျနီကတျတလေူတိလဲ FB မှာအခြိနျကုနျ၊သူမြားအကွောငျးစိတျဝငျစားဖအားလုံးကိုယျ့မိသားစုစားဝတျနီရေး ကနျြးမာရေး အရေးကွီးရကေိစ်စတိကိုရာစိတျဝငျစားစီခငျြပါရေ..ဘဝကိုအကောငျးဆုံးအဓိပ်ပါယျရှိရှိ
ရပျတညျခငျြပါရေ၊ သူမြားလားနီရလေမျးကွောငျးမှာထမျးမဖို့ကတေောငျမှ.ဖွုတျမခစြီခငျြပါ အားလုံးကြေးဇူးတငျပါရဘေုနျးလြှံ ” ဆိုပွီးရေးသား ထားတာပဲဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။ အခြိနျပေးပွီးဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာသောနလေ့ေးဖွဈပါစေ ကြေးဇူးလညျးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။ ခရကျဒဈ
သရုပ်ဆောင်ဘုန်းလျှံကတော့လက်ရှိမှာ ချစ်ရတဲ့ ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးနဲ့အတူအရသာရှိတဲ့ရခိုင်ဟင်းလျာနဲ့အခြားသောစားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ချက်ပြုတ်ရောင်းချပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းလောက်ကလည်းဘုန်းလျှံရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာမိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာခံနေရကြောင်းရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ”အင်တာဗျူးမှာမီးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေလိုက်မိပါရေ
အားအားယားယားပြသာနာကိုကြီးအောင်မလုပ်စွာကောင်းကတ်ပါဖို့ကျွန်တော်ဇာဖြစ်လို့နှောက်ယှက်တေလူတိကိုပြောရလဲဆိုကေ၊ 1 ကျွန်တော်.online မှာဈေးရောင်းရေ..အော်ဒါမမှာပဲဖုန်းဆက်ပနာအကိုမယားဇာလူမျိုးလဲ.ဇာဖြစ်လို့ယူလဲ.အမြဲတမ်းဖုန်းဆက်ပနာနှောက်ယှက်တေ၊
2 fb CB မှာ.အကိုရခိုင်မဟုတ်ပါလား.ဦးနှောက်မရှိပါလားအကို့မယားကိုဇာဖြစ်လို့ယူလဲ၊ 3.fb comments မှာရီးကတ်တေ..မွေးရစွာဝမ်းရီဆာရေလတ်သူမွေးစွာလား.ကျွန်တော့အမိမွေးစွာလားရခိုင်ကိုလာကေလိုက်သတ်ဖို့လာဝံ့ကေလာလတ်ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကိုလာဖို့စွာတောင်
လာလို့မရဗျယ်လားပြောကတ်ပါဦး။ 3.fb. comments တိမှာထပ်ရီးကတ်တေ..ထောင်ထဲဝင်ခါ.ပြန်လွတ်ဖို့ဆုတောင်းပီးကတ်တေကျေးဇူးတင်ပါရေ..ပြန်ထွက်လာရေခါ ဗမာမကိုယူပြီးကေ.ကျေးဇူးဆပ်စွာလားတဲ့ဆုတောင်းပီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါရေ..ယေကေလဲ့ဆုတောင်းတိုင်း
နေ့ချင်းညချင်းလွတ်လာစွာတော့မဟုတ်.ကိုယ့်ပြစ်ဒဏ်ကို.ကျေအောင်.7 နှစ် နဲ့.3 လပီးဆပ်ပြီးထွက်လာစွာပါ၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့လွတ်စွာကလဲဘုန်းလျှံ မို့လွတ်စွာမဟုတ်..ပြစ်ဒဏ်ကို.4ပုံ.3 ပုံပီးဆပ်ပြီးလို့.လွတ်စွာပါ.ယေကလဲ့ဆုတောင်းပီးကတ်စွာကိုကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုပါရေ
ကျွန်တော့အဖေအမေနဲ့ဗမာသူငယ်ချင်း ထိန်ဝင်းနောင်ပါ၊ အခုဘဝတခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရပ်တည်ပြီးကေလျှောက်နီစွာမှာ.အကောင်းမွန်ဆုံးယာအားပီးစီချင်ပါရေ၊ ဘဝမှာလူ့ငရဲမှာလဲအကြာကြီးနီပြီဗျယ်.အခုပိုင်ဆဲနီစွာလောက်ကို.တခုလေ့မဖြစ်.ယေကေလေ.အမျိုးရို့.
အမှန်တရားကိုသိအောင်.ပြောပြရဖို့မဟုတ်ကေအထင်လွဲဖို့.ပြောနီနှောက်ယှက်နီကတ်တေလူတိလဲ FB မှာအချိန်ကုန်၊သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖအားလုံးကိုယ့်မိသားစုစားဝတ်နီရေး ကျန်းမာရေး အရေးကြီးရေကိစ္စတိကိုရာစိတ်ဝင်စားစီချင်ပါရေ..ဘဝကိုအကောင်းဆုံးအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ
ရပ်တည်ချင်ပါရေ၊ သူများလားနီရေလမ်းကြောင်းမှာထမ်းမဖို့ကေတောင်မှ.ဖြုတ်မချစီချင်ပါ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရေဘုန်းလျှံ ” ဆိုပြီးရေးသား ထားတာပဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်
ခွဲစိတ်စရိတ်မရှိလို့ အသက်ဆုံးရှုံးရမလိုဖြစ်နေတဲ့ ဆေးကျောင်းသားအတွက် ငွေကျပ် သိန်း ( ??? ) ကျော် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ တန်ခွန်ကျော်
ချစ်သူမရှိ ရည်းစားမရှိဘဲနဲ့ သူမရဲ့​မွေးနေ့​လေးမှာ စပရိုက်လာလုပ်ပေးတဲ့သူကြောင့် အရမ်းပျော်ရွှင်နေရှာတဲ့ Lဆိုင်းဇီ
ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကြီးတွင်​ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်​စားပြုအကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ဦးအနေဖြင့်​ ဖိတ်ကြားခြင်းကိုခံခဲ့ရ​သော ​​ရွှေကစ်